Download Game Ukunqamula Isilwane: Ekamu Ephaketheni Apk Latest Version
Ikhasi Lasekhaya AwokuzenzisaUkunqamula isilwane: ekamu ephaketheni
Ukunqamula isilwane: ekamu ephaketheni
Siyakwamukela Animal Crossing: Pocket Camp!
Thwebula (9.00 MB)
Siyakwamukela Animal Crossing: Pocket Camp! Phuma ekuphileni kwakho okumatasa futhi ibe ekhululekile amatende umoya ogcwele abangane yezilwane nobukhazikhazi nemvelo.
Lapho befika kule ndawo yakho lapho uya khona, ngabe okuthiwa umphathi we setende!
Nokho, Ungakhathazeki, kungcono umsebenzi elula. Odinga ukukwenza nje ukhethe noma ifenisha, lelo tende noma leyo Izinsiza oyithandayo, uhlele nabo ekamu yakho futhi bameme izilwane ukuvakashela ukuze Liven endaweni up!
Ngo Animal Crossing: Pocket Camp, nsuku zonke inikeza okusha! Kujabulele kwamukeleke mahamba-nendlwana ukusiza wakho van, ngokuvakashela emakamu zabangani noma ukuhlola endaweni izilwane nazo.
Izinyathelo Ukudala Campsite lakho Kuhle
- Izicelo Gcwalisa i Izilwane
Njengoba uvakashela izindawo ezahlukene ukungcebeleka, uzothola izilwane abadinga kancane wosizo! Zizothuthukiswa ngifuna izinhlanzi, izithelo noma ezinye izinto ukuze uthole amatende abo adventure waqala ngakho kungani unganikeli kubo isandla?
Ungathola zonke izinhlobo izinto njengoba uhlole mahamba-nendlwana ukusiza wakho van, ngakho uzizwe ukhululekile ukwenza kancane yokudoba noma ukuqoqa izithelo noma ezimbili endleleni. Nanoma inhlanhla, uzothola kahle ukuthi umngane wakho omusha isilwane ifuna! Futhi fair Akakhethi - esandleni futhi bazothola akunike izinto ekubumbeni ukubuya.
- Craft Ifenisha kanye Izinsiza
Izinto uthola ukuba agcwalise izicelo izilwane ingasetshenziswa sokucaba zonke izinhlobo ifenisha kanye Izinsiza.
Okufanele ukwenze nje ukuvula Catalogue futhi ufake i-oda izikebhe noKoresi. Kungase kuthathe kancane isikhathi, kodwa into yakho kuyoba isilungele ukuthunyelwa ngaphambi kokuthi wazi. peasy Easy!
- Have Izilwane Round ukuba Vakashela
Njengoba uxoxa, ukugcwalisa izicelo kanye ukwandisa sobungane bakho nabanye kanye nezilwane, omunye wabangane bakho entsha angase enze isicelo esikhethekile ngawe sokucaba ifenisha abawuthandayo. Uma ukuphatha sokucaba lokho ezikucelayo, bazokunikeza bemagange ukuza setende yakho.
Campsite lakho. Indlela Yakho.
Intokozo Animal Crossing: Pocket Camp kwakheka isikhala evumelana wena isitayela sakho.
Ukukhetha kwakho ifenisha kanye Izinsiza lunikezwe setende yakho ukubukeka kwalo. Uzahamba okwesikhathi setende bendabuko ephelele netende futhi izoso isethi? Noma mhlawumbe into Flashier lapho ungakwazi ukubamba amakhonsathi? Noma mhlawumbe ungumuntu amadlingozi ofuna nento fancy nge merry-go-round? Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha, ukujabulela kokushiya isitembu yakho ezehlukile setende yakho!
Qaphela: Lo mdlalo thwebula nge ngaphakathi nohlelo.
Qaphela: An uxhumano lwe-inthanethi liyadingeka ukudlala Animal Crossing: Pocket Camp.
Wena onesibopho izimali inthanethi.
Ethandwa - Awokuzenzisa
Ethandwa Entsha - Awokuzenzisa
Grossing Ethandwa - Awokuzenzisa